रोमाञ्चक उपाधि दौड , नेपालले भारतलाई जित्नै पर्ने: सम्भावना विस्तृतमा | Hamro Khelkud
रोमाञ्चक उपाधि दौड , नेपालले भारतलाई जित्नै पर्ने: सम्भावना विस्तृतमा
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – भुटानमा जारी साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले बंगलादेशलाई हराएसँगै उपाधि दौड चार टोलीबीच खुला भएको छ । माल्दिभ्स चारै खेलमा पराजित भएर बाहिरिएपछि बुधबार अन्तिम दिनमा भारत र नेपाल तथा आयोजक भुटान र बंगलादेशबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
दुई समूहमा खेलाइने भने पनि श्रीलंकाले प्रतियोगिताबाट बाहिरिएपछि प्रतियोगिता राउन्ड रबिनका आधारमा खेलाइएको हो । समूहमा हरेक टोलीले अन्य सबैसँग खेलेपछि अंक तालिकाको शीर्षस्थानमा रहने टोलीले प्रतियोगिताको उपाधि जित्नेछ ।
प्रतियोगिताको अन्तिम दिन पहिलो खेलमा बंगलादेश र घरेलु टोली भुटान भिड्ने छन् भने दोस्रो खेलमा नेपालले भारतको सामना गर्दैछ ।
बंगलादेश ४-३ भारत
भुटान १-० नेपाल
भारत ३-० भुटान
बंगलादेश १-२ नेपाल
नेपालको सम्भावना कस्तो ?
साविक विजेता नेपालले प्रतियोगितामा आयोजक भुटानसँग पहिलो खेलमा पराजय भोगेको थियो । अन्य खेलमा माल्दिभ्सलाई २-० र बंगलादेशलाई २-१ ले हरापछि नेपालले ६ अंक छ । त्यस्तै भारत , बंगलादेश र भुटानको पनि समान ६ अंक छ । भारतको गोल अन्तर +३ को छ भने नेपाल र बंगलादेशको समान +२ छ ।
त्यस्तै भुटानको भने -१ को गोल अन्तर छ । प्रतियोगितामा सर्वाधिक अंक बटुल्ने टोली शीर्षस्थानमा रहनेछ। दुई टोलीको समान अंक भएमा ‘हेड टु हेड’ को आधारमा विजेता छानिने छ भने दुई भन्दा बढी टोलीको अंक समान भएमामा उनीहरु बीचको खेलको गोल अन्तर हेरिनेछ ।
तसर्थ नेपालले भारतलाई हराएर अर्को खेलमा बंगलादेश भुटानसँग विजयी भएमा नेपाल र बंगलादेशको समान ९ अंक हुनेछ । अन्तत नेपालले बंगलादेशलाई पराजित गरेकाले नेपाल ‘हेड टु हेड’ को आधारमा अंक तालिकाको शिर्षमा रहँदै उपाधि जित्ने छ । तर भुटानले बंगलादेशलाई पराजित गरे नेपाल ‘हेड टु हेड’ मा भुटान भन्दा पछि पर्ने छ ।
अन्तिम खेलमा बराबरी गरेमा नेपालको उपाधि जित्ने सम्भावना छैन ।
अन्य टोलीको सम्भावना कस्तो ?
बंगलादेश : बंगलादेशले भुटानलाई जितेर भारतले नेपाललाई हराएमा बंगलादेशले उपाधि जित्नेछ । बंगलादेशले जित्दै अर्को खेलमा बराबरी भएपनि बंगलादेश शिर्षस्थानमा रहने छ ।
भुटान : भुटानले बंगलादेशलाई पराजित गर्दै नेपालले भारतलाई हराउनु पर्ने अथवा नेपाल र भारतबीच बराबरी हुनु पर्ने ।
भारत : भारतले नेपाललाई हराउनु पर्ने र भुटानले बंगलादेशलाई हराउनु पर्ने अथवा पहिलो खेलमा भुटान र बंगलादेशबीच बराबरी भएको हुनु पर्ने ।
सबै टोली बराबरीमा रहे ?
अन्तिम दिनको दुवै खेल बराबरी भएमा नेपाल , भारत , भुटान र बंगलादेशबीच समान ७ अंक हुनेछ र यी ४ टोलीबीचको गोल अन्तर हेरिनेछ । नेपालको ० गोल अन्तर , बंगलादेशको +१ , भुटानको -२ र भारतको +२ अन्तर हुने भएकोले भारतले उपाधि जित्ने छ । नेपाल तेस्रो स्थानमा अन्त्य गर्नेछ । यद्दपी उपाधि जित्नक लागि नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाब हुनेछ ।